महिलाहरु पुरुषसाथीसँग कसरी यौन सम्पर्क राख्न चाहन्छन् ? बाहिरियो महिलाको लागि महत्वपुर्ण अध्ययन प्रतिवेदन ! - Gokarna News
महिलाहरु पुरुषसाथीसँग कसरी यौन सम्पर्क राख्न चाहन्छन् ? बाहिरियो महिलाको लागि महत्वपुर्ण अध्ययन प्रतिवेदन !
एजेन्सी– हालसालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनलाइन टेडिङ साईडले मानिसकलाई कस्तो प्रकृतिको यौन लिला मन पर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवदेन सार्वजनकि गरेको हो ।
६० प्रतिशत महिलाले यौन सम्पर्कका बेला पार्टनरलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दा आनन्द आउने बताएका छन् । जिउका रौँ तान्नु, नियन्त्रणमा लिनु, फोहोर बोल्नु तथा जिउमा टोक्नु जस्ता व्यवहार गरेर गरिने यौन सम्पर्कलाई महिलाहरुले सबैभन्दा रुचाएको अध्ययनले देखाएको छ । झण्डै चार लाख मानिसले भाग लिएको उक्त सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत महिलाहरुले सेक्सका बेला आफूलाई आफ्नो पुरुष पार्टनर अश्लील तथा छाडा भएको मन पर्ने बताए ।